I-Semalt Mayelana Nokhiye We-Keyword Ukukhishwa Kwembhalo Nombhalo Ofihliwe
Igor Gamanenko, i-8 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, ithi ukugxilongwa kwegama eliyisihluthulelo nokubhala okufihliwe yizinkinga ezimbili eziyinhloko ezingathinta izikhundla zakho, futhi i-Google ixwayisa abaphathi bewebhu ukuba bagweme lolu hlobo lwezinto. Uma kuziwa ematheksthi afihlekile nokugxilongwa kwegama elingukhiye, iningi labantu bacabanga ngemigqa engamashumi amahlanu emidlalweni emide emlandweni omhlophe ngaphansi kwesiteji sewebhu. Kusho ukubeka umbhalo emakhasini ewebhu injini yokusesha kuphela, hhayi kubasebenzisi.
Kwakuwumkhuba ovamile eminyakeni eminingi edlule, nakuba lo mkhuba ushintshiwe futhi izinto eziningi ezintsha zivele kusukela ngaleso sikhathi. Manje, sitshelwa konke mayelana nendlela yokufihla umbhalo emakhasini, ukuthi ungayifaka kanjani ngaphansi kwezinye izakhi nokuthi ungayifaka kanjani ngaphandle kokuvumela i-Google ukuthi ikwazi noma yini.
Ukugxilwa kwegama elingukhiye ngokuphathelene nokubeka amagama angukhiye nemishwana ngokungenasici esiqenjini sokuqukethwe - stoff meterware online bestellen. Ngokuvamisekile, akenzi lutho futhi kuhloswe ukuthuthukisa isimo sesayithi kwimiphumela yokusesha injini. Uma ukholwa ukuthi ukugxila igama elingukhiye kuzokusiza nganoma iyiphi indlela, wenza iphutha elikhulu.
Kuphephile ukusho ukuthi iningi lezibonelo ezigxilwe ngegama eliyisihluthulelo liyabonakala futhi licacile. Kuhle ukubeka amagama akho angukhiye bese uwafaka ekuqukethwe kwakho, kepha ukugxila igama elingukhiye nokusebenzisa ngokweqile akuvumelekile. Uma ufuna ukuthola izikhundla eziphezulu ku-SERP, kufanele ugxile kwikhwalithi kunokuningi. Ungenzi okuqukethwe kwakho kubonakale kungavamile futhi kungokwemvelo kunamagama amaningi.
Kungani lokhu kuyinkinga enkulu kwisayithi lakho? Uma lo mbuzo ushaya ingqondo yakho, ake ngikutshele ukuthi lapho abantu befuna amagama angokhiye abese beqeda kuwebhusayithi yakho, bafuna ukwazi okwengeziwe ngalawa magama angukhiye nemishwana. Futhi uma usinikeze okuqukethwe okuphansi kwekhwalithi, ayikho ithuba lakho newebhusayithi yakho ukuze usinde isikhathi eside. Umbhalo ofihliwe kanye nokugxila kwegama eliyisihluthulelo kuqinisekisa isipiliyoni somsebenzisi ompofu, ukulimaza idumela lakho lesayithi lonke.
Uma i-Google ikuxwayisa mayelana negama eliyisihluthulelo noma umbhalo ongacacile, kufanele uzame ukususa ngokushesha ngangokunokwenzeka, uqinisekise ukuthi ukwethembeka kanye nekhwalithi yesayithi lakho kugcinwa. Uma ungaqiniseki ukuthi ungasusa kanjani amagama angukhiye amaningi kusuka kokuqukethwe kwakho, sikukwazisa ukuba uthintane nochwepheshe we-SEO noma uzame ukufaka esikhundleni sezinto ezindala ngezihloko ezintsha nezithuthukisiwe.
I-Google iseluleko njalo ukuthi kufanele sibhale inqubo yethu yokuhlanza futhi senze amakhophi wokulondoloza kwedatha yethu. Lokhu kuzosindisa isikhathi sakho, futhi ungakwazi ukulungisa kalula umbhalo ofihliwe nokugxilongwa kwegama elingukhiye.